म्याग्दी । उराठ र पट्यारलाग्दो बुढ्यौली, त्यसमा पनि आँखाले देख्न छोडेपछि घरको चौघेराभित्र कैद भएर बस्नु पर्दाको पीडा कम दुःखलाग्दो हुँदैन । यस्तै दुःख र पीडामा थिए म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६, दिच्...
पाँचवर्षमुनिका बच्चामा हुने रेटिनोब्लाष्टोमा के हो ? जानी राखौं
काठमाडौँ । के तपाईंले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको आँखाको नानीमा अस्वाभाविक टल्कने थोप्लो, आँखा असामान्यरुपमा रातो भएको, बिस्तारै बाङ्गो अर्थात् डेडो हुँदै गएको देख्नुभएको छ ? कहिलेकाहीँ सामान्य समस्य...
बागलुङ । ढोरपाटन नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो पूर्ण खोपयुुक्त नगर बनेको छ । जन्मेदेखि २३ महिनासम्मका सबै बालबालिका खोपको पहुँचमा आएपछि पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा गरिएको हो । नगरभित्रका कुनै पनि बालबालिका यस...
काठमाडौँ । डल्लु आवासस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद्को चौधाैं साधरणसभाले हरिगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यकारी समिति चयन गरेको छ । सभाले समितिका उपाध्यक्षमा राजेन्द्रबहादुर तुलाधर...
वर्षेनी स्वासप्रस्वास जन्य रोगबाट साढे छ लाखको मृत्यु : विश्व स्वास्थ्य संगठन
जेनेभा । विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्लुएचओले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा विश्वमा हरेक वर्ष साढे छ लाख नागरिकको स्वासप्रस्वासजन्य रोगबाट ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । विश्व स्वास्...
डा अनुप बास्तोला, ट्रपीकल मेडिसिन फिजिसियन एचआईभी एउटा भाइरस हो जसको कारणले एड्सको अवस्थामा पुर्याउँदछ । एचआईभीलाई अहिले संसारभरि नै एउटा रोग भन्दा पनि संक्रमणका रुपमा हेरिन...
झापा । झापामा एचआइभी संक्रमितको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । जिल्लामा २०७३ मा १६ जना एचआइभी संक्रमित भेटिएका थिए । विसं २०७२ मा ४३ जना एचआइभी संक्रमित फेला परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्...
राजविराज । ‘हमर प्रतिज्ञा सभक सरोकार, खैनी गुटखामुक्त परिवार, युवा समर्पित स्थानीय सरकार’ भन्ने नारासहित सप्तरी युथ नेपालले गुटखाजन्य पदार्थको बिक्री र प्रयोगविरुद्व शुक्रबारबाट राजविराजमा हस्ताक्षर अ...
काठमाडौँमै वातानुकूलित शारीरिक व्यायामशाला सञ्चालनमा
काठमाडौँ, मंसिर २ । सञ्चालनमा आएको एक हप्तामा नै अत्यधुनिक सुविधासम्पन्न तथा वातानुकूलित शारीरिक व्यायामशाला (फिटनेश पार्क) मा उपभोक्ताको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । सुन्धारास्थित सिटिसी महलको आठौँ तला...
स्लिम बन्ने तरिका सजिलो छ । हामीले खानामार्फत ग्रहण गर्नेभन्दा खेर फाल्ने क्यालोरीको मात्रा कम हुनुपर्छ । यसका लागि कम खाने र शारीरिक काम बढी गर्ने गर्नुपर्छ । तर, स्लिम बन्ने बहानामा धेरैले यस्ता गल्...
स्थानीयद्वारा अस्पताल सञ्चालन गर्न माग
पर्वत । करिब दुई दशकअघिदेखि बन्द मिसन अस्पताल सञ्चालन गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । विकट गाउँका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दक्षिण पर्वतको पैयुँ गाउँपालिका–६ हुवासमा रहेको...
गर्भवती अवस्थामा यौन सम्पर्क राख्न हुन्छ कि हुँदैन ? जानिराखौं !
गर्भवती अवस्थामा यौन सम्पर्क राख्न हुन्छ कि हुँदैन ? टी दम्पतीलाई गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरामा अन्योल हुन्छ । यस विषयमा परामर्श लिन अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले उनीहरू वास्...
रत्ननगर । चितवनमा आजदेखि क्यान्सरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ । सार्क फेडेरेशन अफ अंकोलोजिस्ट नेपालको आयोजनामा विश्वका विभिन्न देशका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय स...
काठमाडौँ । देशभरका बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका...
ओछ्यानमा पसिना आउने गरी सेक्स गर्दा ठूलै व्यायाम गरेको अनुभूति हुन सक्छ । जोडीसँग गरिने यौन कार्यलाई दैनिक ३० मिनेटको व्यायाम भन्न मिल्ला र ? सेक्स र हस्तमैथुन आनन्ददायीमात्रै हुन सक्दैनन्, स्वास्थ्यक...
चरिकोट । दोलखाको कालीञ्चोक गाउँपालिका–१ बेगुम्पामा बौलाहा कुकुरको टोकाइबाट आठजना स्थानीयबासी घाइते भएका छन् । दिउँसो १ बजेको समयतिर अनायासै आएको कुकुरले टोकेपछि स्थानीय त्रसित भएको स्थानीय बासिन्दा पद...
यी लक्षणहरु देखा परेमा हुनुहोस सावधान ! मिर्गौला बिग्रिदै गएको पनि हुन सक्छ !
मानव शरिरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंगमध्ये मिर्गौला एक हो । मिर्गौला रोगका कारण नेपालमा वर्षौनी धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । विकासशील राष्ट्रहरुमा जनचेतनाको कमीका कारण धेरै मानिसहरुको ज्यान गरेको त...
तेह्रथुम । घाँस काट्न जाँदा सर्पले टोकेपछि गत साता जिरिखिम्तीकी देवीमाया कार्की जिल्ला अस्पताल जानुभयो । तर अस्पतालमा भर्ना भएर औषधि लगाउनुभन्दा पहिल्यै स्वास्थ्यकर्मीले यसको उपचार यहाँ हूदैन भनिदिए ।...